10 Days faahfaahin In Bavaria Germany | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Days faahfaahin In Bavaria Germany
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo(Last Updated On: 21/02/2020)
Haddii aad hadda uun bilowday qorsheyneysa safar marayo Bavaria ee Germany, aad u badan tahay in fikirka ku saabsan faahfaahin ah. Waxaad u badan tahay dabooshay tirada sheer ah la yaab leh meelaha ay soo booqdaan. Plus, aad rabto in aad iyaga ku habboon oo dhan in a 10 maalmood faahfaahin ee Bavaria.
Bavaria leedahay wax badan oo ay u soo bandhigtay, iyo in uu yahay xaqiiq ah. Waxaad booqan kartaa tiro badan oo ka mid ah magaalooyinka weyn ee Bavaria, sida Munich, tusaale ahaan. Waxa kale oo aad tegi kartaa on wayn ee Bavarian wadada biir haddii aad tahay connoisseur ah biirka.
Waxaan idin siin doonaa faahfaahin a faahfaahsan Bavaria, oo dhan waxaad u baahan tahay inaad samayso waa Raaca leeyihiin waqti cajiib ah! Sidaas, aynu eegno.
Rail Transport waa ka ugu fiicaan deegaanka Jidka Si Safarka. thwaxaa article waa qoran tahay in wax lagu baro oo ku saabsan tareenka Travel by Save A tareenka, Ugu jaban in Tareenku Tigidhada Website In Adduunka.
Maxaad u baahan tahay in aad ogaato Horreeyey waxaana Bilaabo Iyadoo Our 10 Maalinta faahfaahin In Bavaria?
Ka hor inta aynaan bilaabin, waxaa jira arimo dhowr ah oo u baahan in aad ogaato.
Bavaria waa gobol weyn, oo aad si fudud u isticmaali karto todobaad waxaa ku jira. Waxaa laga yaabaa in loo baahan yahay haddii aad rabto inaad aragto wax walba si faahfaahsan weyn.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad u socoto, waayo, a 10 maalinta safarka, markaas waa in aad ka soo jaro waxyaalaha qaar ka mid ah. Waa maxay more, waxa uu noqon lahaa fiican si ay u tagaan via tareenka. Haddii aad tahay inay sameeyaan, waxaad awoodi doontaa inaad si aad u hesho meel kasta oo waqti ma jiri doono. On top of in, aad fursad u heli doontaa in ay ka markhaati views ugu weyn dalabyo Bavaria.
Intaas waxaa sii dheer, socday tareen iyada oo Bavaria waa mid aad u fudud oo jaban. Tigidhada raqiis yihiin, iyo waxaad booqan kartaa gees kasta oo gobolka.
Dhamaadka, aad u baahan tahay in aad ogaato marka ay soo booqdaan Bavaria. wakhtiyada aad 10 maalmood faahfaahin ee Bavaria daboolo waa in ay yihiin meel ka September si October. Waxaad ka fogaanaysaa doonaa dadkii badnaa, iyo sidoo kale fursad ay ku booqashada waxaad ka heli doontaa Oktoberfest.
Hadda oo dhan ee la daboolay, aynu eegno waxyaalaha kuu keydsan:
Bavaria Day faahfaahin 1 Oo 2: Munich
Marka socday Bavaria, aad leedahay si ay u bilaabaan la Munich. First of dhan, waa ay fududahay in ay gaaraan, ma laha, halkaas oo aad ku sugan tahay Europe. Waxaad awoodi kartaa tareenka a ka meel kasta oo ay gaaraan Munich. Or, haddii aad ka timid meel ka fog, aad duuli karto. Munich waa magaalada ugu wayn ee Bavaria, iyo diyaarado duuli in ay ka soo magaalooyin badan adduunka oo dhan. Haddii aan in, waxaad si fudud ka gaari karin by duulaya magaalo kale oo waaweyn ka dibna socday Munich.
Plus, aynu wax iloobin in 10 maalmood faahfaahin ee Bavaria ma noqon karo dhamaystiran oo aan Munich. Waxaad ka heli doontaa shaki this sixir ah magaalada rugeedka si ay booqasho. Iyo tan iyo munaaraddii saacad cajiib ah in Garten Englisher ah, waxaad yeelan doontaa meelo badan oo la booqasho.
Haddii aad rabto inaad aragto sida ugu badan waxaa ka mid ah intii suurtogal ah, waxaan kugula talineynaa in aad joogtid xarunta. Sidaas, waxaad awoodi doontaa inaad si aad u hesho wax kasta oo lugaynaya noqon doonaa.
By dhammaadka maalinta 2, waa in aad alaabahooda bacaha aad iyo tag magaalada Berchtesgaden.
3 Oo 4: Berchtesgaden Oo Seeraha Qaranka ee ku xeeran
Berchtesgaden waxa uu ku yaalaa ee Bariga South reer Bavaria. Waa jeebka yar oo dalka ee xuduudda la leh Austria. Waxaad ka heli doontaa ugu quruxda badan park qaranka ee Germany ee ku yaala goobahan. Plus, waxa kale oo aad ka heli doonaan in ay in muddo ah ku qaataan magaalada sixir ah ee Berchtesgaden.
Dhamaadka, waxaad yeelan doontaa in ay soo booqdaan Lake Konigsee iyo Nest Eagles. Lake Konigsee waa u gudubno ugu sareeya ee Germany iyo waxa ku wareegsan Buuro weyn. Sida Nest Eagles, oo dhan buffs taariikhda jeclaan doonaa si ay u soo booqdaan, maadaama ay ahayd barta taliska ee naasiga ah.
Haddii aad rabto in aad kor u daraan waxyaalaha, waxa kale oo aad tegi kartaa Salzburg. Magaaladii waa u dhow xuduudda iyo Berchtesgaden, iyo waa si siman sixir si Salzburg!
markaas waxaad la kulmi kartaa maalinta yaab leh casho ee Berchtesgaden. Ka dib markii habeenkii, aad u guurto karaa si caga xiga maalinta 5.
Salzburg in Berchtesgaden
Munich in Berchtesgaden
Linz in Berchtesgaden
Innsbruck in Berchtesgaden
Bavaria faahfaahin Days 5, 6, Oo 7: Garmisch Partenkirchen, Zugspitze, Oo Neuschwanstein Castle
Tallaabada xigta ee aad 10 maalmood faahfaahin ee Bavaria waxaa ka mid ah qaar ka mid ah ugu meelaha picturesque in Germany. hal mar maalintii 5 bilaabmin, waa in aad bood on tareen si Garmisch Partenkirchen.
Halkan waxaa ku qoran waxa aad la kulmi karaan in goobtan:
Day 5: Degto iyo booqo qaybta ugu weyn ee magaalada.
Day 6: Tag sixir ah Neuschwanstein Castle. Waxaad ku ogaan sida mid ka mid ah Daar wayn ugu halyeey ee dunida. Waa qalcaddii ekayd dhab ah iyo mid ka mid ah in waxyoonay qalcaddii Disney ah.
Day 7: Booqo shir of Zugspitze, taas oo si caddaalad ah u dhow magaalada. Halkan waxaad ka heli kartaa mid ka mid ah views ugu fiican ee Alps. Dadka qaar tug, laakiin waxaan kugula talineynaa in aad qaadato baabuur cable ka.
Tani waxay noqon doontaa qayb ka ugu dheer ee safarka iyo mid muhiim ah in boot. Oo maalintii 8, aad awoodid guurto on in ay Rothenburg.
8: Rothenburg faahfaahin In Bavaria
Day 8 waxaa loogu talogalay a tareenku dheer iyo magaalada midabo of Rothenburg umuliya der Tauber. ma aha inay walwal Waxaad in safarka dheer waa, waxaad yeelan doontaa waqti badan si ay u booqdaan magaalada picturesque this. Waxaa aad u yar, oo aad ka arki kartaa in mid ka mid ah galabtii.
By dhamaadka maalinta, aad la cuno karaa Schneeballen ah. Haddii aad rabto, waad joogi kartaa habeenkii, ama aad u soo guurto karaa si yool ay hiigsanayaan: Nuremberg ama Wurzburg.
Bavaria faahfaahin Days 9 Oo 10: Nuremberg Or Wurzburg
Nuremberg waa magaalada labaad ee ugu weyn gobolka Bavaria. Waxaa sidoo kale waa in ay booqdaan meel on your 10 maalmood faahfaahin ee Bavaria. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto, aad had iyo jeer waxa ay u bedelan karaan si ay Wurzburg. Labada magaalo ay yihiin kuwo u dhow kasta oo kale oo Rothenburg, sidaas qayb safarka noqon doonaa mid sahlan.
Labada magaalooyinka waa sixir ah oo leh taariikh Qarniyadii iyo Daar wayn ka buuxsamay. Sidaas, runtii waa in aad si ay u go'aamiyaan mid xiiso leh oo dheeraad ah.
Sida aad yeelan doonaan ku dhawaad ​​laba maalmood oo buuxa, xitaa waxaa laga yaabaa inaad awoodo in ay soo booqdaan labada.
Sidaas, waxaa ay tahay. Your 10 maalmood faahfaahin ee Bavaria, Germany. Waxaana ka yeellay hubi inaad ka mid stop kasta oo muhiim ah ee gobolka heer sare ah ee Europe. Waxaan sidoo kale ka mid ahaa sida ay u gaaraan oo dhan oo iyaga ka mid tareen si dhab ah la kulmaan sixir oo dhan waxa ay leedahay in dalab ka.
Haddii aad rabto in aad wax dheeraad ah oo ku saabsan faahfaahin In Bavaria ogaado, si xor ah u xiriir Save A tareenka.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “A 10 Maalinta faahfaahin In Bavaria Germany” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fitinerary-bavaria-germany%2F የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)